Daniel Foust sy ny 'Ursa' ho sanganasa nomerika | Famoronana an-tserasera
Sary hosodoko nomerika tsara tarehy ao amin'ny 'Ursa' nataon'i Daniel Foust
Joaquín Sorolla dia iray amin'ireo manam-pahaizana ny sary hosodoko ary ilay tena nahalala ny fomba hisamborana ny jiro amin'ireo sary hosodoko menaka ireo izay nanehoany ny teknika lehibe nananany. Mpandoko iray izay ahafahana mahazo aingam-panahy hiezaka handray anjara amin'ny fandalinany ireo singa iray izay sarotra aseho amin'ny canvas.
Daniel Foust dia mpanakanto tsy fantatra fa iza jereo ny atao hoe fandinihana ny mazava ary miasa miaraka aminy, zavatra tsy mora ary bebe kokoa raha toa ka ataontsika amin'ny media nomerika toy ny iray amin'ireo programa Adobe ireo. 'Ursa' dia asa iray manintona ny sain'ny mpijery noho ny filalaovan'ilay hazavana maizina eo amin'ny tarehin'ilay mpilalao sarimihetsika tsara tarehy sy ny fomba itarihan'ny hazavana ny hatsaran-tarehiny, ampiarahina amin'izany tahotra izay manatona azy amin'ny fihetsiny izany.
Eo ambany fiarovan'io bera lehibe io izay mijanona ao ambadiky ny mazoto amin'ity asa ity, izay tsy maintsy ataontsika hoe Ursa no asongadin'ity asa nomerika ity amin'ny inona ny endrik'olombelona, izay omena azy miaraka amin'ny lakile mety mba hampindrana ny tenany amin'ny fikarohana amin'ny antsipiriany tsirairay avy.
Tamin'izany fomba izany sambory ny jiro ary milalao miaraka amin'ny aloka izany dia noho ny safidy hendry amin'ny borosy izay hanamafisana ny tsirairay amin'ireo fiasa amin'ny fihetsik'ilay mpihetsiketsika sy ny fomba ialanany ny maizina.
Daniel Foust no mpamorona an'ity sombina nomerika ity ary misy ny tranonkalany avy amin'ity rohy ity. Azonao atao ihany koa ny miditra amin'ny fihetsik'izy ireo avy inprnt.com ary fantaro ny ampahany amin'ny asany mba hahafahany mitondra azy any an-tranonao mihitsy, satria misy maro mahatalanjona toa ilay manome ny anarany amin'ity lahatsoratra ity androany.
Mpanakanto mahafinaritra hafa izay milalao ny jiro amin'ny fomba mahafinaritra Pascal campion.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Sary hosodoko nomerika tsara tarehy ao amin'ny 'Ursa' nataon'i Daniel Foust
Ny fomba mandrisika hisamborana ny mpijery amin'ny mpanakanto tsy fantatra
Pejin-tranonkala 8 izay anaovana fampidinana ireo logo vector